ငွေကြေးနှင့် ပတ်သတ်လို့ အခက် အခဲ မတွေ့ရအောင် ဒီ စာလေးဖတ်ကြည့်ပါ….မိတ်ဆွေ များ ကို လည်း မျှဝေပေးလိုက်ပါအုံးရှင့် – Shwewiki.com
ပိုက်ဆံ ရှာပါ။ ပိုက်ဆံရှိမှဖြစ်တော့မယ်လို့တွေးမိတဲ့အချိန်ဟာ ခရီးတစ်ခုကိုစတင်ဖို့လက်မှတ်စဝယ်တာနဲ့တူပါတယ်။
လောကမှာပိုက်ဆံရှိမှ ပိုအဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်…။ မိသားစုထဲမှာကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှာနိုင်တဲ့သူကပိုအရေးပါအရာရောက်ပါတယ်…။ အပေါင်းအသင်းတွေကြားထဲကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံရှိတဲ့သူက ပိုလူရာဝင်ပါတယ်..။
လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုခုကိုကြည့်ပါ။ ပိုက်ဆံပိုရှိတဲ့သူက ပိုအရာရောက်ပါတယ်…။ ဒါဟာ လောကကြီးထဲမှာ ရာခိုင်နှုန်းတော်တော်များများဖြစ်နေတာပါ…။ ဘယ်နည်းနဲ့ကြည့်ကြည့်သင် ပိုက်ဆံရှာရပါမယ်။ ငွေစုရပါမယ်..။ သင်ပိုက်ဆံရှိမှ သင်ချစ်တဲ့သူတွေအတွက် သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာတွေအတွက် သင်ပြောချင်တဲ့စကားတွေအတွက် သင်လိုချင်တဲ့အရာတွေအတွက် အားလုံးမဟုတ်ရင်တောင် တော်တော်များများလုပ်လို့ရမှာပါ…။
ခင်မင်မှုကပိုအရေးကြီးတယ်” ဟုတ်ကဲ့ လူတော်တော်များများကတော့ ငွေရှိရင် ပိုခင်ကြပါတယ်…။ ရိုးသားမှုကပိုအရေးကြီးတယ်” ဟုတ်ကဲ့ လူအများစုကတော့ မရိုးသားရင်တောင်ငွေရှိတဲ့လူဆို သိပ်မပြောရဲကြပါဘူး…။ ပညာကပိုအရေးကြီးတယ်” ဟုတ်ကဲ့ ငွေရှိမှပညာသင်လို့ရတဲ့ခေတ်မှာ ပညာရွှေအိုးက ငွေရှိမှဝယ်လို့ရတာပါ…။
ကိုယ်ကျင့်တရားကအရေးအကြီးဆုံး” ဟုတ်ကဲ့ ကိုယ်ကျင့်တရားမကောင်းတဲ့သူတွေငွေရှိလာရင် အမှန်တရားကရောက်လာဖို့ခြေလှမ်းသိပ်နှေးလွန်းပါတယ်…။ “အချစ်ကအရေးကြီးတယ်” ဟုတ်ကဲ့ ရယ်စရာအကောင်းဆုံးပြက်လုံးပါ။ လူအားလုံးလိုလိုကတော့.. ငွေမရှိရင် ရုပ်ဆိုးတယ်လို့မြင်တယ် ငွေမရှိရင် နံတယ်လို့ထင်တယ် ငွေမရှိရင် ပိုင်းလုံးလို့မြင်တယ် ငွေမရှိရင် ရင်မခုန်ကြတော့ပါဘူး…။
ဒါပါဘဲ ဘယ်နည်းနဲ့တွေးတွေး ဘယ်ဖက်ကတွေးတွေး ငွေရှိမှ အရာအားလုံးလိုလိုအဆင်ပြေနိုင်ပါမယ်…။ တသောင်း ဆယ်ခါဖြုန်းရင် တသိန်းပါ။ တသိန်း ဆယ်ခါဆို ၁၀သိန်းပါ…။ ကျွန်တော်တို့ အများကြီးဖြုန်းခဲ့ပြီးပါပြီ…။ မလိုတာတွေဝယ်ခဲ့ဖူးတယ်..။ မတန်တာတွေ စားခဲ့ဖူးတယ်။ မတန်တာတွေ ဝယ်ဝတ်ခဲ့ဖူးတယ်..။ မရှိရင်လည်း ချေးငှားပြီးပျော်ခဲ့ဖူးတယ်..။
သဒ္ဓါမပါဘဲ ကြွားဝါပြီးလှူခဲ့ကြဖူးတယ်..။ အားနာပြီး ကုန်ခဲ့ကြဖူးတယ်..။ အချိန်တန်တော့ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာ ဘာမှအဖက်တင်မကျန်ခဲ့ဘူး..။ အသုံးနိုင်ဆုံးဆုလည်းမရခဲ့ဘူး..။ အစားနိုင်ဆုံး ဆုလည်းမရခဲ့ပါဘူး..။ အဝတ်နိုင်ဆုံးဆိုပြီးလည်းကမ္ဘာမကျော် နိုင်ငံမကျော်ခဲ့ပါဘူး..။
သူ့နေရာနဲ့သူ သုံးသင့်တဲ့နေရာသုံး မဖြုန်းသင့်တဲ့နေရာ မဖြုန်းဘဲ စနစ်တကျစုဆောင်းသွားတဲ့သူတွေ အလုပ်လုပ်သွားတဲ့သူတွေကသာ သူဌေးဖြစ်ပြီး နာမည်ကျော်သွားတာပါ..။ ကျွန်တော်တို့ဖြုန်းခဲ့တဲ့အတွက် ဘာရလိုက်သလဲ…? ဒါ့ကြောင့်…
ကျွန်တော်တို့ သိပ်နောက်မကျခင်ငွေစစုကြရအောင်လား…။ကဲ…. မိတ်ဆွေ သင် ဖြုန်းမယ်ပြင်ထားတဲ့ငွေစက္ကူတွေကို အိတ်ထဲပြန်ထည့်ထားလိုက်ပါ,,…။
လူ ငယ်လေးတွေ အရှုံးပေးရလောက်အောင်လှတဲ့ မေကဗျာ ရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိ တဲ့ ပုံရိပ် များ